အရိပ်ချစ်: အသက်ရှင်နေလျက် ဘဝသေနေသူ နှင့် ဘာကိုတန်ဖိုးထားရမလဲ
အသက်ရှင်နေလျက် ဘဝသေနေသူ နှင့် ဘာကိုတန်ဖိုးထားရမလဲ
ဘဝအတွက် တန်ဖိုးအရှိဆုံး စကားလုံးတွေပါ
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှုပ်ထွေးနေတာတွေကို မရေရာတာတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာပဲ အင်အားပိုကောင်းလာအောင် လုပ်ရမယ်။
( ဆရာတော်ဦးဇောတိက )
လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကြီး တစ်ခုလုံး ကောင်းလာဖို့
လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကြီး တစ်ခုလုံး ကောင်းလာဖို့ဆိုတာ မှန်ကန်တဲ့အသိအမြင်၊ မှန်ကန်တဲ့သဘောထား၊ မှန်ကန်တဲ့ စေတနာပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေကို လူတွေများများလုပ်နိုင်ဖို့ လိုတယ်။
ပြတ်ပြတ်သားသား မဆုံးဖြတ်နိုင်တာက ပြဿနာ
လူတွေမှာ အခက်အခဲဆိုတာ အမြဲတမ်း တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုး ရှိနေမှာပဲ။ အခက်အခဲရှိတာက ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတာကမှ တကယ့်ပြဿနာအစစ် ဖြစ်တယ်။ တစ်ခုခုကို တိတိကျကျ ပြတ်ပြတ်သားသား မဆုံးဖြတ်နိုင်တာက ပြဿနာ ဖြစ်တယ်။
ဘာသာတရားကို အလေးအနက် တန်ဖိုးထားတဲ့လူဟာ
ဘဝကို အလေးအနက် တန်ဖိုးထားမယ်။
ဘဝကို အလေးအနက် တန်ဖိုးထားတဲ့လူဟာ
သူလုပ်သမျှကို သူ့ကိုယ်ပိုင် ဉာဏ်နဲ့သူ စဉ်းစားပြီးတော့
သင့်တော်သလား၊ မသင့်တော်ဘူးလား၊ မှားသလား၊ မှန်သလား၊
ကောင်းသလား၊ မကောင်းဘူးလား၊ ရိုးသားသလား၊ မရိုးသားဘူးလား
ဆိုတာကို သေသေချာချာ စဉ်းစားရတော့မယ်၊ မစဉ်းစားလို့ မဖြစ်ဘူး။
လူရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ တန်ဖိုးကို
ပိုပြီးတော့ မြင့်လာအောင် လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်
အဲဒီဘာသာတရားဟာ အကျိုးပြုတဲ့ဘာသာတရား ဖြစ်တယ်။
ကလေးတစ်ယောက် မွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက် သူဟာ စိတ်ထားရော၊ အသိဉာဏ်ရော
ရင့်ကျက်တဲ့ လူကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ဖြတ်သန်းရမယ်ခရီးမှာ ရင်ဆိုင်သွားရမယ်
အဲဒီအခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ သတ္တိ တော်တော်ကို လိုတယ်။
သတ္တိရှိအောင် ဆိုတာလည်း ကိုယ့်မိဘနဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း
အကူအညီ ပေးဖို့ အများကြီး လိုတယ်။
ဒါပေမယ် အခုခေတ်လို အလုပ်တွေ အင်မတန်များတဲ့ခေတ်၊
မိဘတွေမှာလည်းပဲ သောကတွေ အင်မတန်များနေတဲ့ခေတ်မှာ
လူကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ပိုပြီးတော့ ခက်ခဲလာတယ်။
ပိုပြီးတော့ ခက်ခဲတဲ့အတွက် ပိုတောင်မှ အရေးကြီးလာတယ်။
ဆောက်သွားတဲ့အခါမှာ အိမ်တစ်အိမ် ဖြစ်လာသလိုပဲ
သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပေးလိုက်တာပဲ။
ကိုယ့်ဘဝထဲမှာ သူ့ကို နေရာပေးလိုက်တာပဲ။
ငါ့ကို ဘယ်လို သဘောထားမလဲဆိုပြီး
သူ့ဆီက ဘာမှ ပြန်မမျှော်လင့်ပဲနဲ့ ကိုယ်ပေးနိုင်တာကို မေတ္တာနဲ့ပေးနိုင်ဖို့ သတ္တိလိုပါတယ်။
ရာခိုင်နှုန်းပြည် ရိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုပေးနိုင်ဖို့ သတ္တိလိုတယ်။
ကိုယ့်ဘဝထဲမှာ သူ့အတွက် နေရာပေးနိုင်ဖို့ သတ္တ္တိလိုတယ်။ ငါ့ကို ပြန်ချစ်မှာလားဆိုတဲ့
မျှော်လင့်ချက်မျိုး မထားပဲ ကိုယ်က လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ချစ်နိုင်ဖို့ သတ္တိ လိုတယ်။
အရှုံးအမြတ် မတွက်ပဲ ချစ်နိုင်ဖို့ သတ္တိ လိုတယ်။ အနိုင်အရှုံး မရှိပဲ ချစ်နိုင်ဖို့ သတ္တိလိုတယ်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံနိုင်ဖို့ သတ္တိ လိုတယ်။ တကယ်သတ္တိရှိမှ ချစ်နိုင်တယ်။
ဥပဒေဆိုတာ လွတ်လပ်မှုကို တားဆီးတဲ့အရာလို့ ဆိုနိုင်ပေမဲ့
ဥပဒေမရှိပဲ လွတ်လပ်မှု မရှိနိုင်ဘူး။
စည်းကမ်:နဲ့ လွတ်လပ်မှု၊ တာဝန်နဲ့ လွတ်လပ်မှုတို့ဟာ တွဲနေတယ်။
ဥပဒေမရှိ စည်းကမ်းမရှိတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ လုံခြုံမှုမရှိဘူး။
လုံခြုံမှု မရှိရင်လည်: လွတ်လပ်မှု မရှိတော့ဘူး။ ကိုယ့်အိမ်ထဲကို
ကိုယ်ခွင့်မပြုပဲ ဘယ်သူမဆို ဝင်လာလို့ရရင် လုံခြုံမှုရှိသေ:သလား။
( ဆရာတော် ဦးဇောတိက )
အသက်ရှင်နေလျက် ဘဝသေနေသူ စာအုပ် (စာမျက်နှာ - ၂၅)
ဥပဒေက လူတွေကို အုပ်ချုပ်တာ၊
လူက လူတွေကို အုပ်ချုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။
ဆရာတော်ဦးဇောတိက - လွတ်လပ်တဲ့စိတ် စာအုပ် ( စာမျက်နှာ - ၂၅၅ )
Self-perfection is culture. ဆိုတာ “ မိမိကိုယ်ကို ကောင်းသည်ထက် ကောင်းအောင် ချို့ယွင်းချက် ကင်းအောင် လုပ်တာဟာ ယဉ်ကျေးမှုပါ ” - Self-perfection ဆိုတာ ရုပ်ရည်ကို perfect ဖြစ်အောင် လုပ်တာကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ချို့ယွင်းချက်ကင်းအောင်၊ perfect ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့မရဘူး။ ဒါဖြင့်ရင် perfect ဖြစ်အောင်၊ ကြာလေ ပိုကောင်းလေဖြစ်အောင် ဘယ်ဟာကို လုပ်ရင်ရမှာလဲဆိုတော့ စိတ်ပဲရတယ်။ ဘုရားဟောတဲ့ ကိလေသာတွေ လုံးဝ ကင်းတဲ့ထိအောင် တရားအားထုတ်ဖို့ဆိုတာဟာ Self-perfection ပဲ။ ဒါကြောင့် ရဟန္တာဖြစ်သွားရင် စိတ်က perfect ပဲနော်။ ချို့ယွင်းချက် ကင်းသွားတယ်။ အဲသလိုဆိုရင် အဲဒီရှုထောင့်ကနေ ကြည့်တော့ ဘုရားဟောတဲ့ တရားတော်တွေက အမြင့်ဆုံး ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်သွားတယ်။
(ဆရာတော်ဦးဇောတိက - မဟာမြိုင်တောရ)
နေ့တိုင်း အချိန်တိုင်း စိတ်ကို ကြည့်ပြီးတော့ သိပြီးတော့ မကြာမကြာ ညှိပေးနေဖို့ လိုပါတယ်။ အခုခေတ် ဥပမာနဲ့ ပြောရရင် တချို့အိမ်တွေမှာ automatic voltage regulator ဆိုတာ သုံးတယ်။ အဲဒီစက်က လျှပ်စစ်မီးဗို့အားကို ညှိပေးတယ်၊ ထိန်းပေးတယ်၊ များလာရင် လျှော့ပေးတယ်။ နဲသွားရင် တိုးပေးတယ်။
အဲဒီ automatic voltage regulator လိုပဲ သတိဆိုတာလည်း စိတ်ကို ညှိပေးတယ်၊ ထိန်းပေးတယ်၊ ခံစားမှုတွေ၊ စိုးရိမ်တာတွေ၊ ကြောက်တာတွေ၊ အားငယ်တာတွေ လွန်မသွားအောင် ထိန်းပေးတယ်။
လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းအပေါ်မှာ စေတနာထားတယ်၊ မေတ္တာထားတယ်၊ ကောင်းစေချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုင်္ပြီးတော့ ကောင်းတဲ့လူဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။ သတိနဲ့ နေတဲ့ အလေ့အကျင့်ကို လုပ်ပါ။ အဲသလိုဆိုရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကောင်းအောင် လုပ်ရာလည်း ရောက်တယ်။ လောကကြီးကို
ကောင်းအောင်လုပ်ရာလည်း ရောက်သွားတယ်။ ပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရား ကိုလည်းပဲ အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်ရာ ရောက်သွားပြီ။
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက အကုသိုလင်ထဲမှာ အဆိုးဆုံးပဲ။ မှားနေတဲ့အမြင်ဟာ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး အရာဖြစ်တယ်။ မှားတဲ့အမြင်ပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ မှားတာတွေ တွေးမယ် မှားတာတွေ ပြောမယ်၊ မှားတာတွေ လုပ်မယ်။
ကုသိုလင်ထဲမှာ သမ္မာဒိဋ္ဌိက အားအကြီးဆုံးပဲ။ မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဟာ စိတ်ရဲ့အဆင့်အတန်းကို ပိုပြီးမြင့်စေတယ်။ စိတ်ဓာတ်အင်အားကို ပိုပြီးကြီးစေတယ်။ ဒါကြောင့် မှန်ကန်တဲ့အမြင် ရှိတဲ့သူဟာ အင်အားကြီးတဲ့သူလို့ ဆိုရမယ်။
(ဆရာတော်ဦးဇောတိက - မဟာမြိုင်တောရဆရာတော်)
အသက်ရှင်နေလျက် ဘဝသေနေသူ စာအုပ် (စာမျက်နှာ - ၇၇)
သူများက သိပ်နိမ့်နေပြီးတော့ ကိုယ်က မြင့်ချင်နေလို့ မလွယ်ဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်မြင့်မှ ကိုယ်လည်း မြင့်မယ်။ ရေမြင့်ရင် ကြာမြင့်သလိုပဲ။ ကိုယ့်သားသမီးတွေ အဆင့်အတန်း မြင့်စေချင်ရင် ကိုယ့်သားသမီး တစ်ယောက်ထဲအတွက် ကွက်ပြီးတော့ တွေးလို့မရဘူး။ သူနဲ့ပေါင်းတဲ့ သူ့မိတ်ဆွေတွေပါ ထည့်တွေးရမယ်။ ငါ့သားသမီးတွေရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ အဆင့်အတန်းမြင့်မှ ဖြစ်မယ်။ သူတို့အတွက်ပါ ငါတို့ ဝိုင်းစဉ်းစားရမယ်။ အဲဒီလို မိဘတိုင်းက ဝိုင်းပြီး စဉ်းစားလိုက်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။ တော်တော် တိုးတက်လာမယ် နော်။
အသက်ရှင်နေလျက် ဘဝသေနေသူ စာအုပ် (စာမျက်နှာ - ၁၀၁)
A hundred times every day I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. (Albert Einstein)
တစ်နေ့ကို အကြိမ်တစ်ရာလောက် ကျွန်တော့်ကိုယ်ကိုကျွန်တော် သတိပေးပါတယ်။ ငါ့ရဲ့ အတွင်းဘဝ (အသိဉာဏ်၊ ပညာ၊ စိတ်ထား၊ စိတ်ချမ်းသာမှု)နဲ့ အပြင်ဘဝ (နေရေးထိုင်ရေး၊ စားရေး သောက်ရေး၊ လုံခြုံရေး) နှစ်ခုလုံးဟာ အခု အသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ ကွယ်လွန်သွားကြပြီးဖြစ်တဲ့ လူတွေရဲ့ အားထုတ်ဆောင်ရွက်မူပေါ်မှာ အခြေခံနေတယ်။ ငါဟာ သူတို့ဆီက ရခဲ့သလို ၊ ရနေသလိုပဲ ငါရခဲ့သလောက် ငါရနေသလောက် ပြန်ပေးဖို့ကို အားထုတ်ရမယ်။
( အိုင်စတိုင်းလ် ) - အသက်ရှင်နေလျက် ဘဝသေနေသူ စာအုပ် (စာမျက်နှာ - ၆၈)
the eXistence မှ ဆရာတော်ဦးဇောတိက ရေးသားပြုစုထားသော
သတိနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်သိ
စာအုပ် မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by Ayeit Chit at 03:45
Debut Video Capture 5.11 Beta
အရှင်ဆန္ဒာဓိကရဲ့  ဆုံးမစာလေးပါ
သတိနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်သိ
အတုယူ မမှားစေချင် အပိုင်း (၁)
ကင်ဆာကို တွန်းလှန်ပေးမည့် အံ့အားသင့်စရာ နည်းလမ်း
တံမြက်စည်းလှည်းခြင်း၏အကျိုး ငါး ပါး